Monday December 22, 2014 - 17:11:19 in Wararka by Web Admin
Dhawaan waxaan booqasho ku tagay magaalada Muqdisho oo ay si xoog leh ugu qulqulayaan qurbo joog fara badan oo ka timid daafaha caalamka. Dadka ku nool Muqdisho ayaa u muuqda kuwo sawiro kala duwan iyo qiimeyn kala duwan ka qaatay nuucyada qurba joog
Dhawaan waxaan booqasho ku tagay magaalada Muqdisho oo ay si xoog leh ugu qulqulayaan qurbo joog fara badan oo ka timid daafaha caalamka. Dadka ku nool Muqdisho ayaa u muuqda kuwo sawiro kala duwan iyo qiimeyn kala duwan ka qaatay nuucyada qurba joogta ku soo laabanaysa wadanka, iyadoo qaar ka mid ah dadkii aan la sheegaystay ay iiga warameen aragtidooda ku aadan wadanka Sweden iyo qurba joogta halkaan ku nool.
Qaar ka mid ah dadkii aan la sheekaystay ayaa u muuqday kuwo fikran fiican ka haysta nolosha Soomaalida Sweden, iyadoo qaarkood ay ii sheegeen in dadka ka yimaada Sweden ay yihiin kuwa ugu jeebka yar marka lala barbar dhigo qurba joogta kale, sida kuwa Maraykanka iyo Ingiriiska iyo xitaa kuwa ka yimaada wadamada Carabta. Hadalkaas ayaa u muuqda mid xaqiiqada u dhow maadaama aan ognahay in heerka shaqo la’aanta ee Soomaalida Sweden uu ku dhowyahay 65%.
Sweden ayaa dhinaca kale lagu amaanay waxbarashada, caafimaadka iyo nolosha guud ee dadka balse marka laga hadlayo dhaqaalaha ayay aad u adagtahay in laga taajiro Sweden. Qaar ka mid ah Soomaalida halkaan ku nool ayaa isku dayay in wadooyin kala duwan ay dhaqaale uga sameeyaan Sweden, iyadoo tiro ka mid ah dadka ku laabtay Soomaalia ee Sweden ka tagay ay yihiin kuwo jaaliyado iyo mashruucyo ururo kula laabtay dalkii. Taasi ayaa keentay in markii aad dadka sheekeysataan ay filayaan in aad wadato mashruuc NGO iwm.